Ny fiheverana ny screw ary ny vahaolana screw screw
Tsy mora ny mikasa kiraro miaraka amin'ny fiasa mahomby izay mahafeno ireo fepetra voalaza etsy ambony. Amin'ny drafi-pandrefesana, ny lafin-javatra manaraka ireto dia tokony hojerena 1. Ny mampiavaka ilay akora sy ny endriny maro, ny refy ary ny hafanana amin'ny fotoana fanampiny. Ny toetran'ny ...
Fampahalalana mahazatra amin'ny screw
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana skoto efa mahazatra any Chine dia 45 vy, 40Cr, vy vita amina, 38CrMoAl, halavam-patatra avo lenta, sns. 1) Ny vy 45 dia mora ary misy fiasa fanaovan-java-bava, fa ny fanoherana mitafy azy, ny fanoherana ny korosi ary ny fahanterana mahantra ny fanoherana. Fitsaboana hafanana: Novonoina sy ...
Fampidirana ho an'ny firafitra sy fampiasa amin'ny screw vaovao
1 、 Ny firafitra sy ny fampiharana ny sakamalaho misaraka Ny firafitry ny kodiarana mitokana dia mampiavaka ny fametahana taolan-tehezana ao amin'ny fizarana miempo, mizara ny rozom-bary mavesatra amin'ny fizarana roa, manangana fisarahana fisarahana feno-drano mandritra ny fizotran'ny kiraro fanodinana, mamela ny rehetra mafy m ...